အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းယောဘလွတ် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့နှင့်အတူ Apply!
နိုဝင်ဘာလ 12, 2018
Dubaj Zjednoczone အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှ Arabskie Nadal raj podatkowy စကားပြောခန်း!
နိုဝင်ဘာလ 13, 2018
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းယောဘလွတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အကိုင်အကြံပေးချက်များအိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့ကိုအလုပ်အကိုင်စျေးကွက်ရောက်ရှိရန်ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ အောင်မြင်စွာအလုပ်ရှာဖွေသူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏တင်လိုက်တယ်။ ငါတို့သည်သူတို့ကိုကူညီနိုင်ပုံကိုသိနေကြသည်။ အထူးသဖြင့်ဘယ်လိုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှပြောင်းရွှေ့ဖို့။ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်။ ကျယ်ပြန့်အိန္ဒိယအမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်လောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည် အမ်းမရိတ်အတွက်အလုပ်လျှောက်ထား.
နှင့်ကျိန်းသေ, သင်တို့သည်ငါတို့၏အတူကလုပျနိုငျ အထူးကု၏အသင်း။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ HR မန်နေဂျာများ ပြည်ပမှာအလုပ်အတွက်သင့်ကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ငါမပြုမီကဤ website ကိုမတှေ့အဘယ်ကြောင့်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သာစိုးရိမ်, ဖြစ်ရလိမ့်မည် ?. ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ဖို့ကြိုးစား ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ် site မှသင်သည်တတ်နိုင်သလောက်ရ။ စိတ်၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာကြည့်ရှိသည်။ ထိုအခါ updated ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်ဝန်ထမ်းတွင်ကျယ်စွာများ၏စာရင်းသက်ဆိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်မြော်လင့်နေကြသည် သငျသညျစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဆောင်းပါးတွေကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်.
ဒါကြောင့်, သင်ရှာနေလျှင် အိန္ဒိယလူတစ်ဦးအဖြစ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်သငျသညျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီနှင့်အတူသင်၏ပရိုဖိုင်မှတ်ပုံတင်ရန်သငျ့သညျ။ ထိုအခါနှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့် ပတ်သက်. သူတို့နှင့်အတူစကားပြောဖို့ပိုကလူထွက်ရှာပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် အိန္ဒိယလူတစ်ဦးအဖြစ်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း သည်အခြားအင်ဒီးယန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, သင်၌အကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည် သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူများလူနေမှုပုံစံစတဲ့အတွေ့အကြုံကို.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခု ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်အဘို့အအချက်အလက်များ၏ကောင်းသောလမ်းညွှန်များ & အပိုင်းပိုင်းပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်ရနိုင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။
တင်ထားသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - အလုပ်သစ်တစ်ခုအတွက်
UAE တွင် CV ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။